ezihlobene patent Amazon amafayela mfihlo yedatha ukusakaza - Blockchain Izindaba
Amazon unqobile igunya lokwenza yokusakaza esigcawini idatha ezingase ukuvumela ababhalisile ukuthola idatha cryptocurrency kuthengiselana real-time.
patent Amazon uchaza uhlelo lapho umuntu ukusakaza idatha kungase kungabi yigugu kangaka bebodwa, usebenzisa Bitcoin futhi cryptocurrency kuthengiselana idatha njengesibonelo. Nokho ngokuhlanganisa le datha ukwaziswa okuvela emithonjeni ezengeziwe, “ukusakaza datha abe ligugu.”
Lithi patent: “Ngokwesibonelo, iqembu abathengisi ngogesi noma internet abamukela Bitcoin ukuthengiselana ungase ube ikheli lokuthumela ezingase correlate nge ikheli Bitcoin. I abathengisi electronic ingahlanganisa ikheli lokuthumela nge idatha yokukhokha Bitcoin ukudala idatha kwehlisa futhi ushicilele kabusha idatha kuhlanganiswe njengendlela kuhlanganiswe ekusakazeni idatha.”
Thumela Previous:Umshwalense nomdayisi Marsh isebenza nge-IBM kungxenyekazi Blockchain
Thumela Landelayo:Korean mfihlo Ukuhwebelana uqale self isiqondiso umzamo
May 15, 2018 ngesikhathi 12:18 PM